Saldhigga tareenka ee ugu mashquulka badan Yurub ayaa laga dhex dhisay 3 sano, inta u dhaxaysa 1861 iyo 1864. Naqshadeeyaha ayaa naqshadeeyay 9 taariikho la yaab leh oo qurxiya xarunta tareenka gudaha iyo 23 taalladaha waxay ku qurxiyaan wajiga saldhiga. Astaamaha waxay matalaan magaalooyinka waaweyn ee Yurub ee tareenka uu ku xirayo Paris.
In ka badan 500,000 rakaabku waxay marayaan Hamburg Hbf (Hbf waa erayga gaaban Hauptbahnhof oo u tarjumaya Xarunta Dhexe) xarunta tareenka ee Jarmalka. Sayidka, Waa xarunta labaad ee tareenka ugu mashquulka badan Yurub.
Hadaad qorsheynaysid safarka tareenka ilaa Jarmalka, waad ku raaxeysan kartaa muusikada qadiimiga ah. Sidaas, intaad wax iibsanayso xusuusta daqiiqadii ugu dambaysay, waxyaabaha daruuriga u ah safarka, iyo qabashada qaniinyada si loo cuno, aad ayaa lagugu soo dhoweynayaa inaad dhageysato oo aad ku raaxaysato afarta xilli ee Vivaldi.